याै:न सम्पर्क राख्नेवित्तिकै पुरुष निदाएपछि महिलाहरुमा पर्छ यस्ताे अ’सर ! पुरा हेर्नुहोस्... -
याै:न सम्पर्क राख्नेवित्तिकै पुरुष निदाएपछि महिलाहरुमा पर्छ यस्ताे अ’सर ! पुरा हेर्नुहोस्…
महिला र पुरुषबीच यौ नसम्पर्क भइसकेपछि कतिपय पुरुषहरु तुरुन्तै निदाउने गर्छन् भने कतिपय महिलाहरुमा त्यसको असर २४ घण्टासम्म देखिने गर्छ । सम्बन्ध राख्नेवित्तिकै महिलालाई अंगालो नहाली वा कुराकानी नगरी निदाउने पुरुषप्रति महिलाहरुको धारणा फरक हुने गर्छ । जस्तो कि स्वार्थी, माया नगर्ने, अ’सन्तोषी जस्ता आ’रोपहरु लगाउने गर्छन् ।
तर, के वास्तवमै सम्पर्क राख्नेवित्तिकै निदाउने पुरुष साँच्चै स्वार्थी हुन्छन् त ? किन पुरुषलाई सम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्छ ? सामान्यतयाः रातको समयमा सम्पर्क राख्ने गरिन्छ । रातको समयमा प्रायः मानिसहरु थाकेका हुन्छन् । सम्पर्क राख्नेवित्तिकै निन्द्रा लाग्नुको पहिलो कारण यहि नै हो । तर, सम्बन्ध प्राकृतिक प्रक्रिया हो ।सम्बन्धको बारेमा महिला र पुरुषको शरीरमा भिन्न प्रकारको प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ । महिला अग्रानिज्म अझै उ’त्तेजि’त हुन्छ र महिलाहरु सम्बन्धपछि झन् बढी पुरुषको मायामा पर्छन् ।
पुरुष अग्रानिज्म भने सम्बन्धपछि इ’ज्या’कुलेट हुन्छ र हर्मोन उत्पादन हुन्छ । जसले शरीरमा आलस्यता पैदा गर्छ साथै सम्पर्कको दौरान शरीर निकै थाक्ने भएकाले पुरुषहरु छिट्टै निदाउने विभिन्न अनुसन्धानमा उल्लेख छ । तुरुन्तै निदाउने गर्छन् भने कतिपय महिलाहरुमा त्यसको असर २४ घण्टासम्म देखिने गर्छ ।
पार्टनर बिचको सम्बन्ध एक अर्काको विश्वासमा अडिएको हुन्छ । एक – अर्कालाई केरकार गरियो भने भित्रभित्रै सम्बन्धमा चिसोपना आउँदै जान्छ भने स्वतन्त्र छोडिदियो भने कता पुगिसक्छ थाहा नै हुदैँन । त्यसैले जीवन जति संवेदनशील छ सम्बन्ध पनि उत्तिकै छ ।
पछिल्लो समय सम्बन्धहरु ना’जुक बन्दै गइरहेका छन् । प्रविधि र विज्ञानको विकासले मानिसलाई अनावश्यक आवश्यकता र तनावतिर डोर्याइरहेको छ । मानिसहरु के कारणले सम्बन्धमा दरार आउँदै छ भन्ने कुरातर्फ कहिल्यै ध्यान दिदैँनन् तर सम्बन्ध बिग्रिएकोमा भने गुनासो गर्दै हिँड्छन् ।
सम्बन्धमा तित्तता आउनुमा एक अर्काबीच हुने संवाद मुख्य हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । मानिसहरुको बोलीले उनीहरुको सोचाई दर्शाउँछ । उनीहरु जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरिरहेका हुन्छन, ती शब्दहरुले मानिसको सोच्ने क्षमता कस्तो छ भन्ने पत्ता लाग्ने अध्ययनमा उल्लेख छ
← कोरोना जित्न सङ्घर्स गरेको पाकिस्तानमा फेरी ठुलो बज्रपात :हेर्नुहोस
कोरोना महामारीसँग जुध्न चीनले गर्यो फेरी यस्तो ठुलो घोषणा..पुरा पढ्नुहोस →